Ungayilungisa kanjani intshebe: Izeluleko namasu amahle kakhulu Amadoda aSitayela
Ukwazi ukuthi uzilungisa kanjani intshebe yakho kuyisihluthulelo sokwenza isithombe sakho sisebenze kahle kakhulu. Futhi yilokho Ukugqoka, ukuhamba nokuziveza ngesitayela akwanele uma izinwele zobuso zikude kakhulu nokuhle..
Ukulungisa intshebe kuqukethe ukukhokha uchungechunge lokunaka izinwele zakho zobuso. Ekugcineni, bamane nje bayimisebenzi yokunquma kanye nokuhlukanisa ukuthi, ngokuziphinda, kuzobonakala kulula ngokwengeziwe. Ukufinyelela ezingeni likaKristofer Hivju namanye amadoda athandekayo anentshebe akunakwenzeka uma ufuzo lungalungile, kepha ungakhungatheki ngalo.
1 Ungayisika kanjani intshebe
1.1 Ukubumba intshebe
1.1.1 Hlanganisa izitsha ukuthola umphumela omuhle kakhulu
1.2 Ukugcinwa kwabancane
1.2.1 Igcina umugqa wemvelo
2 Uzilungisa kanjani izintshebe entanyeni
3 Uzilungisa kanjani izintshebe ezihlathini
3.1 Ulayini ophakeme noma umugqa ophansi
Ukusika intshebe yakho uzodinga amathuluzi amathathu: ikama, isikele futhi-ke ukugunda intshebe okunamasethingi amaningi wobude. Sondeza umsebenzi ukhumbula ukuthi, Yize kunemigqa ejwayelekile wonke amadoda angayilandela, ngokwendlela, akukho noyedwa. Ukuthola uhlobo oluhle kakhulu lwentshebe yakho kuyindaba yokuzivumelanisa nezinwele zobuso nokumila kobuso.
Izintshebe zikhula kokubili ubude nobubanzi. Lokho kuyinzuzo, ngoba ukunikeza ukwelashwa okuhlukile engxenyeni ngayinye ukuze ivelele kakhulu noma ngaphansi kukho konke kuzokuvumela ukuthi wandise noma wandise ubuso bakho kuye ngobunjalo bayo. Isibonelo, ukushiya izinwele esilevini isikhathi eside kusiza ukwandisa ubuso. Yize ukuqonda amasignali ayo imvamisa kuyindaba yokulingwa nephutha, ukuma kobuso bakho kuzogcina kumaka indlela ekufanele.
Hlanganisa izitsha ukuthola umphumela omuhle kakhulu
Mane nje uhlanganise izindawo ezahlukahlukene (ukubamba eceleni, amadevu, izihlathi nesilevu) lapho kukhula khona izinwele bese udlulisa okusikiwe kunombolo oyikhethile. Njengoba konke kumayelana nokufuna umphumela omuhle, uma ulungile ngesikele, qhubeka nabo. Hlanganisa amadevu akho bese usula udebe lwakho olungaphezulu ngawo, kodwa kulungile uma amadevu akho ehlanganisa ingxenye ethile yodebe lwakho. Lapho ubude bentshebe budlula umhlathi, ukusetshenziswa kwesikele, kanye nalokho okusika intshebe.
Ukugxila emininingwaneni kuhlale kunomvuzo, futhi nezintshevu (ikakhulukazi eziphakathi nendawo nezide) azenzeki. Hlola isimo sezindawo eziyinkinga kakhulu kaningi ukuze intshebe yakho ihlale ibukeka ingenaphutha. Ukuhlanganisa imicu ngentambo kuzokwembula lezo zinwele ezingalawuleki noma ezinde ngokweqile.. Zisike.
Igcina umugqa wemvelo
Iningi lezintshevu libukeka libukeka kangcono lapho lilungiswa, kepha unganikeli ngohlangothi lwalo lwasendle ngokuphelele. Kungumqondo omuhle ukucatshangelwa thuthukisa umugqa wemvelo wentshebe yakho esikhundleni sokudweba imigqa ebukhali kakhulu namajika okwenziwa.
Uzilungisa kanjani izintshebe entanyeni
Yize ukudweba intamo kuqondile, kuvame ukwenziwa amaphutha angaqondakali, njengokucacisa intshebe emhlathini. Kepha khumbula: umugqa wentamo ubizwa ngokuthile.
I-walnut ibhentshimakhi lapha. Imigqa yentamo ebhekwa njengokuthopha kakhulu yilezo ezihlala ngenhla nje kukanathi. Indlela esetshenziswa kakhulu ukubeka inkomba neminwe emaphakathi ku-walnut. Ngomunwe wakho ophakathi engxenyeni enkulu kakhulu ye-walnut yakho, kuzoba ngumunwe wakho wokukhomba ozokhomba ukuphakama okufanele ugunde khona intamo yakho.
Lapho iphuzu lenati limakiwe, dweba u- "U" wokucabanga onamathisela inadi ngemuva kwezindlebe zakho (Kubonakala kunzima kakhulu kunalokho okuyikho ngempela). Lapho-ke kufanele ushefe kuphela okungaphansi kwaleyo ndawo ngogawula intshebe noma insingo. Lokho kuqinisekisa intambo engenaphutha.
Uzilungisa kanjani izintshebe ezihlathini
Umugqa wesihlathi ungaba owemvelo, ophakeme noma ophansi. Ulayini wemvelo (ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokungenelela) ungalunga. Kepha kungabuye kube nephethini engajwayelekile noma izindawo ezinobuningi bezinwele eziphansi kungaqokonyiswa. Akukho lutho olungahambi kahle ngalokho, kepha ungakushintsha kalula uma ungakuthandi.
Imigqa yezihlathi ephakeme nephansi izosiza intshebe yakho ibukeke ichazwe kangcono. Njengakuqala, ungasebenzisa into yokugunda intshebe, insingo, nokufaka imicu.
Ulayini ophakeme noma umugqa ophansi
Umugqa ophakeme uyindawo ephakathi nendawo phakathi kwemvelo nokuphansi. Isetshenziswa kakhulu ngoba isebenza kahle kuwo wonke amadoda futhi akudingeki uchithe isikhathi esiningi noma umzamo omkhulu ekuyigcineni kwayo. Imayelana nokususa noma iziphi izinwele ozithola zikhululekile kuma-cheekbones, ngenkathi uzama ukugcina isimo sibe semvelo ngangokunokwenzeka.
Umugqa ongaphakeme ungenziwa ogobile noma isikwele. Kungumqondo omuhle uma unesisindo esiphansi ezihlathini noma uma umane ubukeka uthande ngaleyo ndlela. Uma ufuna lesi sitayela, kubalulekile ukwenza ngokulinganisela. Uma ulahlekelwa yisandla sakho, intshebe yakho ingancishiswa ibe isiqeshana somzimba esincanyana. Endabeni kaChristian Bale, kuyamsebenzela ngoba unentshebe ende, eminyene.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Uzilungisa kanjani izintshebe